Ma mudan yihiin Farmaajo Iyo Kheyre in la maxkamadeeyo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Ma mudan yihiin Farmaajo Iyo Kheyre in la maxkamadeeyo?
Siyaasiyiinta iyo qubarada ka faalooda siyaasadda Soomaaliya, ayaa ku doodaya xilligan in sharciga la hor geeyo Farmaajo iyo Kheyre, oo ka danbeeyey qorshihii ONLF loogu aqoonsaday argagixiso.
MUQDISHO, Soomaaliya- Qubarada ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya, in la joogo waqtigii la maxkamadeyn lahaa Farmaajo iyo Kheyre, oo ahaa raggii ONLF ku daray liiska ururada argagixisada.
Labada nin oo caddowga Itoobiya u shaqeynaya, ayaa sanadkii 2017-kii, halgamaa Qalbi Dhagax u gacan galiyey dalkaasi, iyagoo gollihii xukuumadda ee waqtigaas ku riixay, in ururka gobanimo-doonka ee ONLF, loo aqoonsado mid argagixiso ah.
Qubarada ayaa ka dhawaajiyey, in shakhsi ama dowlad Soomaaliyeed aysan ku dhiiran arrintaas, ka hor labada nin, waana kuwa ku talinaya in kiiska arrintaasi la horgeeyo Maxkamad awood u leh, si ay u mutaan ciqaab u dhiganta gafkii ay dalka iyo dadka ka galeen.
Indheer garadka ayaa tilmaamaya, in labadooda oo sharciga lala tiigsado, ay fariin u direyso, siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed, oo badankooda mararka qaar ku dhaqaaqa, falal lidi ku ah masiirka dalka, dhaawacayana hannaanka dowladnimo.
Qubarada qaarkood oo warbaahinta la hadlay, ayaa yiri "Waa kuwo ka tallaabsaday deyrkii soomaalinnimada, waxeyna dhulka la galeen qabkii iyo qaranimadii Soomaaliyeed, iyagoo noqday shisheeye kalkaal, waana qasab in la maxkamadeeyo, goor ay noqotaba"
Kheyre ayaa wajahaya ceebta ugu darran ee kiiskan, maaddaama Farmaajo uu yahay nin gacantiisa ku bur buriyey, mustaqbalkiisa siyaasadeed, isagoo aan rajo badan ka lahayn inuu ku sii nagaado saaxada siyaasadda dalka, waxaana niyad jabka ku kordhisay, guul daradii uu kala kulmay, inuu xukunka dalka awood ciidan ku qabsado.
Balse Kheyre, oo u eg nin uu Farmaajo ku soo shaqeystay, ayaa weli ka gaabsanaya ka hadalka arrintan, isagoo waqtigan u hanqal taagaya kursiga ugu sareeya dalka, taas oo anfariir ku abuurtay bulshada, iyadoo la rumeysan yahay in arrinta ONLF, ay hamigiisa siyaasadeed ku noqon doonto caqabad iyo fadeexo aan dharaarna ka harin.
Kheyre waxaa sidoo kale loo adeegsaday, dadkii uu siyaasadda ku matalayey, waxaana 3 sano iyo bar, oo dano gaar ah lagu fushaday, uu maanta yahay madi siyaasadeed, iyadoo siyaasiyiinta ay isku deggaanka yihiin ay ku tilmaamaan, saqiir siyaasadeed, kaas oo aan weli waaya aragnimo ka dhaxlin, jabkii uu baday Farmaajo, mudadii uu joogay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.